Ampiroborobo ny volanao amin'ny fanarahana ireo dingana tsotra | Famoronana an-tserasera
«Pop Art & mpiara. Flyer »avy amin'i QuattroVageena dia manana lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Tianao ve ny manao lamina lamba fa tsy fantatrao ny fomba hampiroboroboana izany amin'ny tena fiainana? Te-hahita asa amin'ny famolavolana vokatra ve ianao? Ity ny hafatrao!
Raha mijery ny manodidina antsika isika dia misy vokatra marobe izay manana lamina miverimberina na lamina (lambam-pandriana modely, taratasy taratasy, mosara ...) sy ny hafa miaraka amina endrika tsotra kokoa. Ireo vokatra rehetra ireo dia noforonin'ny olona iray ary mety ho izany olona izany ianao.
Raha liana hahafantatra ny fanaovana a lamina avy amin'ny sary hosodoko dia azonao atao ny manamarina ireo dingana rehetra ao ity lahatsoratra teo aloha ity.
Saingy, rehefa vonona ny volavolantsika ... ahoana ny fampiroboroboana azy ireo? Inona no tokony hataoko raha te handefa azy ireo any amina orinasa mpamorona vokatra aho? Ireo hevitra ireo dia hanampy anao.
1 Manomàna takelaka teknika volavolanao
2 Manaova katalaogy santionany
3 Manatreha foara
4 Ampidiro amin'ny sehatra fivarotana ny volanao
5 Fampiroboroboana amin'ny media sosialy
Manomàna takelaka teknika volavolanao
Ny fanomanana takelaka teknika dia hahafahan'ny orinasa mahafantatra ny fiasan'ny volavola anao araka ny tokony ho izy amin'ny fampifanarahana ny vokatra avy aminy.
Mba hanaovana izany dia afaka mamorona modely ifotony ao amin'ny Photoshop izahay izay manampy antsika hampihatra ny volavolantsika tsirairay. Ao no hametrahantsika:
Ny lohatenin'ny volavolantsika.
Sarin'ny tatitra. ny tatitra Io no singa fototra famerimberenana ny lamina na lamina miverimberina.
Ny haben'ny tatitra amin'ny cm (sakany sy hahavony). Zava-dehibe ny fahafantarana ny halehiben'ity singa miverimberina ity, izay hiankina amin'ny vokatra tiantsika hamoronana. Ohatra, raha lamba firakotra izany dia tsy maintsy mieritreritra momba ny habetsaky ny zavatra nolazainy fa hipetraka isika tatitra, tsy misy fanodikodinam-po na fahagagana ratsy ao anatin'ny seta.
Sarin'ny tatitra mifandraika amin'ny iray hafa tatitra, amin'ny maody fanahafana. Ilaina ihany koa ny mahita ny fifandraisan'ireo singa fototra amin'ny famerimberina amin'ny tsirairay mba hahafahan'izy ireo mifanaraka tsara avy eo. Amin'ny endrika biriky, takelaka sns.
Sarin'ny valin'ny lamina. Amin'ny habe lehibe kokoa dia azontsika atao ny mametraka ny fanahafana ny volontsika lamina, mba hahazoan'ny orinasa hevitra momba ny valiny farany.
Ilaina ihany koa ny mametraka ny mode modely izay misy ny sary: ​​RGB na CMYK, ka ny pirinty dia mahatoky amin'ny volavolainay nefa tsy mamono ny lokony.
Amin'ity takelaka teknika ity dia tsy maintsy ampidirintsika ny volavolantsika, amin'ny JPEG, PNG, na araka ny fangatahan'ny orinasa.
Manaova katalaogy santionany
Ny famoronana katalaogy santionany dia mety amin'ny fampisehoana ny asanao amin'ireo mety ho mpanjifanao.
amin'ny afaka mampiditra tantaram-piainana iray isika mba hahafantarana antsika bebe kokoa, ankoatry ny volavolainay. Miaraka amin'izy ireo Azontsika atao ny mampiditra fanesoana na haingon-trano diso mba hahitana ny fomba fisehoany sy hakana hevitra. Amin'ity lahatsoratra teo aloha Niresaka momba ny fomba fanaovana a makety.
Ny katalaogy dia tsy maintsy manaitra ny maso mba hisarika ny sain'ny olona mahita azy.
Ny foibe famolavolana dia atao manerana an'izao tontolo izao izay ahafahanao mivarotra ny fahazoan-dàlan'ny laminao ary mampiroborobo ny tenanao mivantana amin'ireo orinasa.
Ampidiro amin'ny sehatra fivarotana ny volanao
Ao amin'ny tamba-jotra dia misy sehatra fivarotana maro miavaka amin'ny famoronana karazan-vokatra rehetra mifototra amin'ny volavolan'ny artista, izay mampakatra azy ireo ho takalon'ny amidy isan-jato. Ity isan-jato ity dia afaka 10% ka hatramin'ny 50%, miankina amin'ny sehatra sy ny fanapaha-kevitr'ilay artista. Mety ho an'ny vao manomboka izy io, satria ny tranonkala dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana ny vokatra sy ny fandefasana azy manaraka, tsy misy fahasarotana bebe kokoa ho an'ny mpamorona.
Fampiroboroboana amin'ny media sosialy
Ilaina ihany koa ny fampiroboroboana amin'ny tambajotra sosialy, izay ahafahanao mahazo olona betsaka kokoa. ny fampiasana marika na tenifototra amin'ny vokatrao ary maka sary mahasarika maso sy matihanina tena ilaina amin'ny fampiroboroboana tsara izy ireo. Misy ihany koa ny fitaovana fandoavam-bola azo ampiasaina amin'ny fampisehoana bebe kokoa ny vokatrao eo amin'ny mpihaino manokana, izay mety hiteraka fitomboan'ny varotra anao na kaomandy baiko lehibe kokoa. Ankoatr'izay, ny fifandraisana amin'ny mpanjifanao no fampiroboroboana tsara indrindra azonao atao amin'ny vokatrao.
Inona no andrasanao manomboka mampiroborobo ny volavolanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Mampiroborobo ny volanao amin'ny fanarahana ireo dingana tsotra ireo